आइएमई र आइएमई पेको वर्ल्डकप उत्सव–२०१८ सार्वजनिक, विजेताले बैंकक घुम्ने अवसर पाउने
काठमाडौं। आइएमई लिमिटेड र आइएमई पेले आइएमई वर्ल्डकप उत्सव–२०१८ सार्वजनिक गरेका छन्। विश्वकप फुटबलको २१औँ संस्करणअन्तर्गत रसियामा जारी फुटबल प्रतियोगिताका दर्शक सबै यो उत्सवमा सहभागी हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। आइएमई..
भाटभटेनी अनलाइन एफवान सफ्टले एक्वायर गर्यो अब 'इसेवा पसल'
काठमाडौं। चर्चित अनलाइन सपिङ पोर्टल 'भाटभटेनीअनलाइन डटकम' लाई एफवानसफ्ट ईन्टरनेशनल प्रालिले एक्वायर गरेको छ। सफट्वेयरको क्षेत्रमा ख्याति कमाएको एफवान सफ्ट कम्पनी नेपालका ठूला आइटी कम्पनीमध्येको एक हो। विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा..
२० करोड पर्ने भव्य र स्टाइलिश रोयल एनफील्ड बाइक सार्वजनिक
काठमाडौं । बुलेट बाइक बनाउने सुप्रसिद्ध कम्पनी रोयल एनफील्डले नयाँ हाई पर्फर्मेन्स बाइक सार्वजनिक गरेको छ । बाइकको नाम लकस्टक हो र यसलाई लन्डनमा आयजित एक समारोहमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा..
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आइतबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, तथा मट्टीतेलको मूल्य ३÷३ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै अब..
खेलाडी सन्दीप लामिछाने टाटाको ब्रान्ड एम्बेस्डर, कम्पनीद्वारा २५ लाखको कार प्रदान
काठमाडौं । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने टाटा कम्पनिको ब्राण्ड एम्बेसडर बनेका छन् । सन्दीपले बुधबार टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ..
३६ अर्ब लगानीको होङ्सी शिवम सिमेन्टले उत्पादन थाल्यो
नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीमा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सी शिवम सिमेन्टले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छ । नेपालको शारदा समूह र चीनको होङ्सी समूहले करीब ३६ अर्बको लगानीमा..
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुईरदुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको आयल..
चाँदीभन्दा महंगो भयो भेनिला वनस्पति, आइसक्रीम महंगिने
काठमाडौं । आइसक्रीम किन्दाखेरी तपाईंले भेनिला फ्लेभरको विकल्प देख्नुभएको होला । विगत दुई वर्षमा भेनिलाको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । बेलायती बजारमा यसको मूल्य प्रतिकिलो ६०० डलर पुगेको छ । नेपाली..
नेपालदेखि बंगलादेशसम्म सुरुङमार्ग बनाएर अन्तरदेशीय सडक जोडिने
काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपालदेखि बंगलादेशसम्म सुरुङमार्ग बनाएर अन्तरदेशीय सडक सञ्जाललाई सबल बनाउने बताएका छन्। दक्षिण एशियाली मुलुकका साना तथा मझौला व्यवसायी मञ्चको तेस्रो सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन..
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रप्पको स्टील र आल्मुनियम करबिरुद्ध भारत, चीन र रुस एकै ठाउँमा, उठाए प्रश्न
जेनेभा । चीन, भारत, रूसलगायतका विश्व व्यापार संगठनका केही सदस्यराष्ट्रले अमेरिकाद्वारा स्टील तथा आल्मुनियमको आयातमा लगाइएको करबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाद्वारा हालै घोषणा गरेको कर नीतिबारे एसिया, यूरोपलगायतका डब्लुटिओ सदस्य..
५ सय रुपैयाँबाट शुरु गरेको व्यवसायले बनायो लखपति
मोरङ । पवन हेयर सैलुन, मोरङ जिल्ला उर्लाबारीको यो निकै चर्चित सैलुन हो । यहाँ कपाल काट्नका लागि पालो कुरिरहेका ग्राहकको लाइन देख्दा लाग्छ, शहरमा अर्को कुनै सैलुन नै छैन..
सिन्डिकेट तोड्न बनेपा-धुलिखेल रुटमा साझादेखि मेट्रोसम्म
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले केही व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेट तोड्न कोटेश्वर पूर्व बनेपा–धुलिखेलसम्मका लागि उपत्यकामा पञ्जीकरण चलेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पठाउन थालेको छ । विभागले पटके इजाजत दिँदै आज मात्रै साझा यातायात..
पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल लिटरको १०५
Posted on Apr 03 2018
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २र२ रुपैयाँ बृद्धि गएको हो । बृद्धि भएको मूल्य अनुसार अब प्रतिलिटर..
काठमाडौंमा दुर्इ दिनदेखि ४० मेगावाट विजुली कम, प्राधिकरणले विजुली व्यवस्थापन कसरी गर्यो?
Posted on Apr 01 2018
काठमाडौँ। हावाहुरीका कारण क्षतिग्रस्त भएको खिम्ती लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइनको मर्मतसम्भार सम्पन्न भई विद्युत् आपूर्ति भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा उक्त..
सेयर बजारमा लहडमा लगानी गर्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री खतिवडा
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङद्वारा आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजित भेटघाट एवं..
डीडीसीमा दैनिक ६० हजार रुपैयाको दही चोरी
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० बाट तयारी दही चोरी हुन्छ भनेर पत्याउन कठिन होला। तर यो सत्य हो। डीडीसीका विभिन्न आयोजनाबाट दैनिक ६० हजारभन्दा बढी मूल्यबराबरको दही..
बैदेशिक लगानीको लागि आकर्षक मुलुक बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्दै नेपाली वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि यहाँ पाँच दिवसीय सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला प्रारम्भ भएको छ । नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र..
साल्ट ट्रेडिङको २५ प्रतिशत बोनस शेयर पारित, अब तोरीको तेल तथा उखु लगानी गर्ने
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको मंगलबार सम्पन्न ५१ औं साधारणसभाले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको..
'कपडा डट कम'को औपचारिक शुभारम्भ
Posted on Mar 04 2018
काठमाडौं । ‘लाबिज एन्ड ब्रायन फेसन लिमिटेड’ले शनिबारबाट कपडा डट कम नामक अनलाइन सपिङ साइटको औपचारिक थालनी गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले विशेष कार्यक्रमबीच साइटको..
साझा यातायातले इ–टिकेटिङ शुरु गर्दै, पैसाको साटो कार्डको प्रयोग गर्न सकिने
ललितपुर । साझा यातायातले ‘इटिकेटिङ’ शुरु गर्न तयारी थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा इटिकेटिङ लागू गर्न लागिएको साझा यातायातका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले जानकारी दिए। इटिकेटिङ शुरु भएपछि..
सात ग्यास उद्योगलाई ‘एनएस’ चिन्ह
काठमाडौं । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले थप ३ ग्यास उद्योगलाई एनएस ९नेपाल स्ट्याण्डर्ड० चिन्ह प्रदान गरेको छ। यससँगै चिन्ह पाउने उद्योगको संख्या सात पुगेको छ। पछिल्लो पटक चिन्ह प्राप्त गर्ने उद्योगहरुमा..
प्रतियुनिट २० हजार डलर पुगेको बिट क्वाइनको भाउ ६ हजार डलरमुनि पुग्यो
लक्जेम्बर्गमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज बिटस्ट्याम्पमा बिट क्वाइनको भाउ लगातार ओरालो लागेको छ । मंगलबार यो ६ हजार डलरभन्दा तलको दरमा खरिद/विक्री भयो, जुन एक महिना अगाडिको १७ हजार १ सय..
चीनले बनायो चालकरहित कार्बन–फाइबर रेल
बेइजिङ ।चीनले चालकरहित कार्बन–फाइबरबाट मोनोरेल निर्माण गरेको छ । विश्वकै अग्रणी मानिने चिनियाँ रेल उत्पादक कम्पनी सीआरआरसी छङ्छुङ् रेलवे भेहिकलले यसको निर्माण गरेको हो । सीआरआरसीका अनुसार यो रेलले प्रतिकुल मौसमी..
वर्षमा ४ लाख किलो पाचक खान्छन् नेपाली
काठमाडौं । वर्षौंदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमबाट बाक्लै सुन्दै÷देख्दै आएको एउटा व्यापारिक विज्ञापनको नारा छ– जे आउँछ, मजाले पचाउँछ ! खाएको पचाउने उत्पादन भएको दाबी दर्शाउने यो नारा कुनै ‘पाचक’ ब्रान्डको हो..
पाल्पा । पानीको बचतका लागि धारामा हात देखाउँदा मात्र पानी झर्ने सेन्सर धाराको जडानप्रति पाल्पाका होटल व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन्। पहाडी जिल्ला पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानीको बचतका लागि होटलमा सेन्सर..
लोडसेडिङ घटेपछि औद्योगिक क्षमता ९.१ प्रतिशतले बढ्यो
Posted on Feb 05 2018
काठमाडौं । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि मुलुकको औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार..
‘हुकिङ हटाऊ, महशुल उठाऊ’ अभियानमा प्राधिकरण
काठमाडौं । ‘हुकिङ हटाऊ महशुल उठाऊ’ अभियान शुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ललितपुरले गत साउनदेखि यही माघ २० गतेसम्म ३ सय ७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका ललितपुर..
मोबाइल फोनमा सबैभन्दा बढि खर्च गर्ने कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ । व्यक्तिगततर्फ खर्च गर्नेमा उनी अग्रस्थानमा देखिएका हुन् । नेपाल टेलिकमका अनुसार घिसिङले..
इन्धनको मूल्य बढेसंगै हवाई भाडा बढ्यो, अव कहाँ जान कति ?
Posted on Feb 04 2018
काठमाडौं । हवाई इन्धनको मूल्य बढेसंगै भोली देखि हवाई भाडा पनि बढ्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा संचालक संघले शुक्रबारनै हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेपनि भोली सोमबारदेखि कार्यन्वनमा आउने भएको हो..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले विहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको विहीबार सम्पन्न बैठकले पेट्रोलमा एक रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा..
Results 889: You are at page 8 of 30